चीन बाट नेपालीहरुले रुदै यस्तो पठाए भिडियो हेर्नुहोस्…सक्दो सेयर गर्नुहोस् !
अ,वैध काममा समेत नेताहरुको सं,लग्नता भएको आरोप लाग्ने गरेको हुनाले त्यस्तो क्रि,याकलाप रोक्नको लागि भए पनि नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू भ्र,ष्टाचार रोक्न हो भने पहिला तपाई, क. प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुुर देउवाको सम्पतिमा थि छानविन हुनपर्यो ।
संघीयतापछि तीन तहको सरकार निर्माण भए पनि जनताले सोचअनुरुप कुनै काम गर्न नसकको केन्द्रीय सदस्य कमला रोकाले बताइन् । बैठकका बोल्ने क्रममा तीन तहको सरकार नि,र्माणपछि जनताले थप दुख पाएको औँल्याइन्। स्थानीय सरकार निर्माण भएपछि पालिकास्तरबाटै झन् ठूलो भ्र,ष्टाचार निम्तिएको उनको भनाइ छ ।